Trano ambanivohitra any Galicia | Vaovao momba ny dia
Trano ambanivohitra ao Galicia, torohevitra sy hevitra hijanona
Susana Garcia | | zavatra ilaina, soso-kevitra, General
El Mitombo hatrany ny fizahantany any ambanivohitra any GaliciaTsy ho an'ny zava-poana fa ao anatin'ny vondrom-piarahamonina iray izay manana faritra ambanivohitra voatahiry tsara izay misy endrika mahafinaritra sy fomban-drazana tsy misy farany. Izany no mahatonga ny olona maro kokoa hisafidy ny hisotro ronono andro vitsivitsy any ambanivohitra Galicia, hankafy ny fiadananan'ireo faritra ireo sy hahafahany mifandray amin'ny natiora.
Hanome anao izahay torohevitra rehefa mitady ny trano ambanivohitra ary koa hevitra vitsivitsy momba ny trano ambanivohitra any Galicia izay mety ho safidy tsara. Amin'izao fotoana izao dia misy fizahan-tany any ambanivohitra lehibe ka tsy ho sarotra amintsika ny mahita trano amin'ireo ivon-toerana ambanivohitra ireo izay mitazona ny hakantony rehetra.
1 Torohevitra momba ny fisafidianana ny trano ambanivohitra
2 Ny sasany amin'ireo trano ambanivohitra tsara indrindra any Galicia
2.3 Trano ambanivohitra Fofe Rectoral
2.4 Trano ambanivohitra Fervenza
Torohevitra momba ny fisafidianana ny trano ambanivohitra
Ny iray amin'ireo zavatra tokony hoeritreretinao hatramin'ny voalohany dia raha tianao anatiny na morontsiraka, satria any Galicia dia mifanaraka tsara ireo fahafaha-manao roa ireo. Misy trano ambanivohitra akaikin'ny morontsiraka, afaka mankafy ny torapasika mahatalanjona, fa ny hafa izay any amin'ny toerana afovoan-tany toa an'i Ourense ary manome zaridaina mahatalanjona ihany koa. Vantany vao tapaka ity dingana ity dia tsy maintsy mitady ny trano ambanivohitra tsara indrindra isika. Ny fahafaha-manao amin'ity tranga ity dia tsy misy farany, satria ny sasany natao ho an'ny fizahan-tany fitsangatsanganana, ny sasany kosa mitady fialan-tsasatra tanteraka, misy ireo izay mikendry ny mpivady ary ny hafa amin'ny fizahan-tany ao amin'ny fianakaviana. Tsara raha dinihina ny karazana fizahantany tadiavintsika hitadiavana trano mifanaraka amin'izay tadiavintsika.
Ny zavatra iray tokony tsy hadino dia ny trano misy akaikin'ny foibe na tanàna lehibe fa ny hafa kosa lavitra loatra. Raha te hitsidika zavatra hafa isika na manana tanàna eo akaiky eo, dia tsy maintsy mametra ireo trano ambanivohitra voafantina ihany koa isika. Tsy misy olana any Galicia, satria matetika dia kilometatra vitsivitsy miala ny tanàna izahay amin'ny toerana ambanivohitra sy tena mangina.
Amin'ny fotoana boky dia tsara kokoa hatrany ny manao azy mialoha, indrindra amin'ireo toerana be mpitia, toy ireo akaikin'ny tanàna toa an'i Santiago de Compostela. Amin'ny fahavaratra dia betsaka kokoa ny fizahan-tany, saingy tsy maintsy tadidinao foana fa mitombo ny asa amin'ny faran'ny herinandro sy amin'ny faran'ny herinandro lava.
Ny sasany amin'ireo trano ambanivohitra tsara indrindra any Galicia
Rehefa misafidy koa afaka mahazo aingam-panahy kely isika. Betsaka ny trano ambanivohitra araka ny voalazantsika, ka eto ihany no hahitantsika ny sasany izay manana referansa sy famerenana tena tsara, saingy tsy midika izany fa izy ireo ihany no mendrika.
Manomboka amin'ny iray amin'ireo trano any ambanivohitra izay mazàna manintona izahay izay resahina betsaka. La Quinta de San Amaro dia mitovy dika amin'ny hakantony sy kalitao, miorina ao Meaño, ao afovoan'i Rías Baixas malaza. Ity faritra voahodom-boaloboka ity no toerana mety indrindra hampiatoana sy hanandrana ireo divay malaza miaraka amin'ny fanondroana fiaviana. Ny trano itoerany dia misy dobo ety ivelany mitazana ny lohasaha, noho izany dia ampirisihina hitsidika azy mandritra ny vanin-taona fahavaratra hanararaotra ny fijanonanao. Ankoatr'izay, ity trano itoerana ity dia matetika manolotra fitsidihana orinasa mpamokatra divay any Albariño, izay sanda fanampiny lehibe. Ny trano vato mahazatra dia tsy hahavery ny hatsarany ary afaka mahita toerana toa ny fipetrahana vato lehibe sy tranom-bahiny efa nohavaozina isika.
ihany koa fantatra amin'ny anarana hoe Cabañitas del BosqueMiatrika karazana trano ambanivohitra mahafinaritra izahay izay manome tsiambaratelo betsaka, natao manokana ho an'ny mpivady izay maniry handany faran'ny herinandro amin'ny filaminana. Kabine tsy miankina kely misy ao an-tanànan'i Coruña, Serra de Outes, akaikin'ny moron-dranomasin'i Muros eo amoron'ny Noia. Manolotra serivisy mahaliana sasany izy ireo, toy ny vata fampangatsiahana feno sy ny sakafo maraina any an-toerana, ary koa ny fieken-keloka.
Trano ambanivohitra Fofe Rectoral
Araka ny asehon'ny anarany, ity trano ambanivohitra ity dia miorina ao amin'ny trano fivarotana galisiana taloha, trano vato tsara naverina tamin'ny laoniny saingy nanandramana hitahiry ny endrika mahazatra miaraka amin'ny fampiononana rehetra ankehitriny. ny ny trano dia nanomboka tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo ary miavaka amin'ny tilikambo mimanda. Manana zaridaina lehibe hialana sasatra izy ary trano fisakafoanana ihany koa izay anompoan'izy ireo ny sakafo Galisiana tiana. Any amin'ny tanànan'i O Covelo any Pontevedra no misy azy.
Trano ambanivohitra Fervenza
Ity trano ambanivohitra tsara tarehy ity Any amin'ny faritanin'i Lugo no misy azy, kilometatra vitsivitsy miala ny tanàna mimanda. Izy io dia trano taloha iray hafa tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo izay nohavaozina ary miorina amin'ny faritra voajanahary tena mangina. Izy io dia ao anaty ala arovana ary ny anarany dia avy amin'ny riandrano akaiky azo tsidihina, satria amin'ny riandrano 'fervenza' dia midika riandrano. Izy io dia manana fomba tsara tarehy miaraka amin'ny fanaka vita amin'ny hazo ao anatiny. Ao ivelany dia misy ihany koa ny dobo filomanosana ahafahana mankafy mandritra ny fahavaratra ny fandroana tsara voahodidin'ny filaminana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Trano ambanivohitra ao Galicia, torohevitra sy hevitra hijanona
Egypt miaraka amin'ny ankizy
Dia an-tongotra namakivaky an'i Villa Borghese